Tilmaam: Falanqaynta Macaamiisha oo leh Fikrado Ficil Leh | Martech Zone
Xog badan ma ahan wax ugub ku ah adduunka ganacsiga. Shirkadaha badankood waxay naftooda ka fikiraan inay yihiin kuwo xog-wade ah; hogaamiyaasha teknolojiyada waxay dejiyeen kaabayaasha aruurinta xogta, falanqeeyayaashu waxay kala sifeeyaan xogta, suuqleyda iyo maareeyayaasha wax soo saarkuna waxay isku dayaan inay wax ka bartaan xogta. In kasta oo ay uruurinayaan oo ay ka baaraandegayaan xog ka badan sidii hore, shirkadaha ayaa seegay aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan wax soo saarkooda iyo macaamiishooda maxaa yeelay iyagu ma adeegsanayaan aaladaha saxda ah ee ay ku raacayaan adeegsadayaasha dhammaan safarka macaamiisha ama haddii kale waxay nuqul ka samaynayaan xogta oo ay ku soo bandhigayaan khaladaad falanqaynta.
Waxay kuxirantahay mowduuca gaarka ah, hal su'aal oo qaabeysan oo kujira SQL waxay sifiican ugu qaadan kartaa saacad in laqoro oo lasoo helo. Weydiimaha ad hoc waxay la halgamayaan inay keenaan falanqeyn macaamil oo waxqabad leh maxaa yeelay jawaabta su'aashaada koowaad waxay noqon kartaa su'aal kale. Waxaad baraneysaa in ka badan 50% macaamiisha gujiya batoonkaaga CTA ay u helaan dariiqa bogga saxiixa, laakiin in ka yar 30% macaamiishaas waxay abuuraan astaan ​​isticmaale. Hadda waa maxay? Waa waqtigii lagu qori lahaa weydiin kale SQL si loo soo ururiyo gabal kale oo xujo ah. Falanqaynta maahan inay sidan ahaato.
Tilmaame waa madal hoggaamineed ee Macaamiisha Falanqaynta ee u suurtagelisa wax soo saarka iyo kooxaha xogta inay ka gudbaan xaddidaadda aaladaha caadiga ah ee BI si ay go'aanno u gaaraan iyagoo fahmaya hab-dhaqanka isticmaalaha dhammaan barta taabashada. Kaliya Tilmaamku wuxuu si toos ah ugu xiraa bakhaarkaaga xogta, uma baahna nuqul, wuxuuna awood siiyaa dadka isticmaala ganacsiga inay ka jawaabaan su'aalaha falanqaynta macaamiisha ee adag iyaga oo aan ku tiirsaneyn kooxaha xogta ama SQL. Maareeyayaasha wax soosaarka iyo suuqleyda ayaa socodsiin kara isla su’aalihii ilbiriqsiyo qaadan lahaa saacadaha falanqeeyayaasha xogta si ay u qoraan. Aragtida xogta waxqabadka leh waa seddex tallaabo oo yar.
Tallaabada 1: Qeex Ujeeddooyinkaaga Ganacsi iyo Qiyaasaha
Si loo dhiso qaab wax ku ool ah oo xog ah, waa inaad marka hore qeexdaa ujeedooyinkaaga ganacsi iyo kiisaska isticmaalka. Falanqaynta Macaamiisha waxaa loola jeedaa inay kaxeyso go'aamada kooxaha wax soo saarka iyo suuqgeynta, marka dib ugu laabo natiijooyinka aad rajeyneysid inaad ku guuleysatid. Yoolalka waa in lala waafajiyaa ujeeddooyinka ganacsiga muhiimka ah. Tilmaamuhu wuxuu cabbiri karaa dabeecadaha dhammaan isticmaaleyaasha, shaqsiyaadka adeegsada, iyo wax kasta oo u dhexeeya, sidaa darteed waxaa habboon in lala socdo tilmaamayaasha heerar kala duwan. Marka xigta, go'aami mitirrada iyo KPI-yada kuu sheegi kara haddii aad guuleysaneysid. Tusaalooyinka qaarkood waxay noqon karaan:
Kordhi beddelaad isticmaale cusub
Hoos u dhig macmiilka
Aqoonso kanaallada suuqgeynta ugu wax ku oolka badan
Ka hel dhibcaha isku dhaca socodkaaga dusha
Markaad ku degto hadaf, dhis su'aal aad rajeynayso inaad kaga jawaabto xogta isticmaalehaaga. Tusaale ahaan, dheh waxaad hiigsaneysaa inaad kordhiso korsashada alaab cusub. Waa kuwan tusaalayaal su'aalo ah oo aad u baahan tahay inaad ka jawaabto markaad falanqeynayso qalabkaaga kaqeybgalka isticmaalahaaga:
Macaamiisha caymiska ahi ma waxay qaateen sheyga si ka dhakhso badan isticmaalayaasha bilaashka ah?
Immisa gujis ama shaashad ayeey ku qaadataa adeegsade inuu gaaro badeecada cusub?
Ilmo korsasho cusub ma leedahay saamayn togan ku yeelashada adeegsadaha hal kalfadhi? Guud ahaan fadhiyo badan?
Ku hubaysan su'aalahan iyo xogta si aad uga jawaabto, waxaad ku dhex qodmi ​​kartaa kumanaan kun oo ficilada isticmaalaha guud ahaan safarka macaamiisha. Isu diyaari inaad ku tijaabiso fikradahaaga mala-awaal dareemayaal ah.
Tilaabada 2: La Soco Safarkaaga Macaamiil ee Safarka Macaamiisha ee Multipath
Astaamaha muujinta asaasiga ahi waa Safarka Macaamiisha Multipath. Safarka macaamiisha waxaa loo soo bandhigayaa inuu yahay masaf badan, oo muujinaya qulqulka isticmaaleyaasha iyada oo loo marayo go'aanno kala duwan oo ku dhex yaal boggaaga ama barnaamijka moobiilka. Muuqaalka safarka waxay ka caawineysaa kooxaha wax soo saarka iyo suuqgeynta inay daaha ka qaadaan dabeecadaha gaarka ah iyo dhibcaha taabashada macaamiisha, haynta, ama xiiqda.
Kala qaybinta masaska ayaa sii u oggolaanaysa kooxdaada inay hesho dhibcaha saxda ah ee khilaafaadka halkaasoo adeegsadayaashu ay ka leexanayaan habdhaqanka la doorbido ama ay ka fogaadaan alaabta gebi ahaanba. Safarka Macaamiisha Multipath wuxuu sidoo kale u oggolaanayaa shirkadda inay aqoonsato ilaha muhiimka ah ee soo jiidashada macaamiisha, jabinta qaybo shaqsiyeed oo ka mid ah masafka si loo barbardhigo safarrada macaamiisha ee la midka ah. Kooxuhu waxay markaa isku toosin karaan khariidadooda wax soo saarka si ay ula tacaalaan dhibaatooyinka la soo darsa khibradaha isticmaalaha isla markaana ujeedkoodu yahay inay ku celceliyaan natiijooyinka macaamiisha ku habboon.
Tallaabada 3: Qod qoto dheer oo leh Cohorts iyo Profiles
Mar alla markii aad falanqeeysay siyaabaha adeegsadayaashu ula macaamilaan alaabadaada, kooxdaada suuq-geynta ayaa tallaabo uga qaadi kara ololeyaasha bartilmaameedsanaya macaamiishaas oo ay u badan tahay inay leeyihiin qiimo nololeed oo sarreeya. Tilmaamtu waxay kuu oggolaaneysaa inaad kala qaybiso isticmaaleyaasha ku dhowaad aqoonsi kasta oo la qiyaasi karo iyada oo loo marayo horumarinta wada-hawlgalayaasha habdhaqanka. Waxaad ka heli kartaa:
Isticmaalayaasha hela emaylkooda ugu horreeya ee suuqgeynta subaxnimadii Isniinta waxay aad ugu dhowdahay inay ku biiraan kuwa hela isgaarsiintooda ugu horreysa toddobaadkan.
Maxkamadeeyayaasha bilaashka ah waxay u muuqdaan kuwo xanaaqsan ilaa ay ku kallifaan xusuusin ah in tijaabadoodu ay dhammaato maalinta xigta.
Haddii kooxdaada suuq-geynta ay dooneyso inay hesho dhadhanka, Tilmaamtu waxay bixisaa astaamaha isticmaalaha, iyaga oo u oggolaanaya inay ka faa'iideystaan ​​shakhsiyaadka gaarka ah ee macaamiisha ugu fiican. Bakhaarkaaga xogta gudaheeda waxaa ku jira qoraal ah talaabo kasta oo isticmaale ah. Faahfaahinta isticmaalaha ee tilmaamtu waxay kugu qaadaysaa dhammaan safarka macaamiisha, laga bilaabo gujiska koowaad illaa kan ugu dambeeya. Qaybaha gaarka ah iyo wada-hawlgalayaasha ayaa kor u qaadaya xayeysiinta suuq-geynta shakhsi ahaaneed.
Waxaa jira dahab ku dhex qarsoon bakhaarkaaga xogta, Tilmaamtu waxay kaa caawineysaa inaad wax ka dhigato. Uma baahnid aqoonta koodhka ama qaddarinta kaabayaasha xogta si aad u hesho aragtiyo falanqeyn oo waxtar leh. Waxa kaliya ee aad ubaahantahay waa shey muujinaya sheyga iyo helitaanka xogta isticmaale ee shirkadaada.
Isku day Demo Tilmaam ah
Tags: bixogta dalabdillaaccohorts caadadiihelitaanka macaamiishafalanqaynta macaamiishamacmiilka oo cabaadaSafarka macaamiishahaynta macaamiishakala qaybsanaanta macaamiishatilmaamsafarka macaamiisha badanfunnel badanprofiles
WordPress: U Samee Sidebars Toos Qeyb Kasta